Akwụkwọ ndị na-akpakọrịta | Akwụkwọ akụkọ
Akwụkwọ ndị nko
Anyị na-eji ihe na nko anyị, ga-ejikọta ya na usoro, usoro ihe nkiri, wdg. Ma anyị anaghị eche maka akwụkwọ ndị na-akpakọ mgbe n'ezie enwere, mgbe ụfọdụ ọbụna ruo n'ókè dị ukwuu karịa usoro ma ọ bụ ihe nkiri.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale akwụkwọ wee banye na ya, ebe a bụ ụfọdụ utu aha ndị nwere ike ịdị mma ka ị ghara ikewapụ onwe gị na ibe akwụkwọ ahụ ruo mgbe ị mechara ya (ma mgbe ịmechara, chere. na ihe efu nke ka agụọ akụkọ ọma).
1 Kedu ihe akwụkwọ ndị ahụ nwere nko ahụ
2 Ihe atụ nke akwụkwọ na nko
2.1 Ọgba aghara ị hapụrụ, nke Carlos Montero
2.2 Ọbá akwụkwọ etiti abalị, nke Matt Haig dere
2.3 Soft bụ abalị, nke Francis Scott Fitzgerald dere
2.4 Agba nke ọla edo, nke Camila Läckberg dere
2.5 Moby Dick nke Herman Melville dere
2.6 Mpako na ajọ mbunobi, nke Jane Austen dere
2.7 Monologues nke ikpu, nke Eve Ensler dere
2.8 Akwụkwọ nke Illusion, nke Paul Auster
2.9 Site n'aka John Verdon, Emeghela anya gị
2.10 Baztán Trilogy, nke Dolores Redondo dere
Kedu ihe akwụkwọ ndị ahụ nwere nko ahụ
Tupu ịnye gị ihe atụ nke akwụkwọ ndị na-akpa, anyị chọrọ ileba anya n'ihe kpatara na ị gaghị etinye ha. N'ezie, akwụkwọ na-eri ahụ adịghị n'otu isiokwu, ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe omimi, ihe omimi, ịhụnanya, ụjọ, nchịkọta uri ... N'ezie ihe dị mkpa na ihe na-eme ka akwụkwọ ahụ ghara iri nri, ghara ịrahụ ụra ma ghara ime ihe ọ bụla ọzọ karịa ịtụgharị ibe na peeji nke bụ akụkọ n'onwe ya. .
Mgbe onye edemede nwere ike jide onye na-agụ ya n'etiti okwu ya, ahịrịokwu, paragraf na ibe ya ekele maka ụzọ ịkọ akụkọ na nkata nke a., A na-ekwu na ọ bụ akwụkwọ na-eme nko.
Ọ nwere onye nwere ike ime ya? Ee ee, eziokwu bụ na ee. I kwesịkwara iburu n'uche na ọ bụghị ndị niile na-agụ akwụkwọ ga-ejikọta na otu akwụkwọ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ọrụ nwere ndị na-agụ ihe riri ahụ karịa ndị ọzọ, ma nke bụ eziokwu bụ na a ga-enwe mgbe nile onye "ga-aṅụ" akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ.
Ihe atụ nke akwụkwọ na nko
Ọzọ anyị ga-enye gị ọtụtụ ihe atụ nke akwụkwọ na nko na nke ahụ, mgbe ịmalitere ịgụ ha, enwere oge mgbe ị na-enweghị ike ịkwụsị na ị naghị eche na ị gaghị eri nri ma ọ bụ ịrahụ ụra iji mara ka akụkọ ahụ ga-agwụ.
N'ezie, dị ka anyị kwuru na mbụ, nke a bụ ihe gbasara onwe ya karị, a ga-enwe ndị na-ahụta akwụkwọ ndị a na-eri ahụ, na ndị ọzọ na-enweghị ike ijide ha ma mesịa gbahapụ ha. Ọ bụ ya mere anyị ji nye gị ọtụtụ ihe atụ.
Ọgba aghara ị hapụrụ, nke Carlos Montero
Ọgba aghara ị hapụrụ...
N'okwu a, anyị na-ekwu maka akụkọ banyere Raquel, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke na-amalite ịrụ ọrụ dị ka onye nnọchiteanya na ụlọ akwụkwọ obodo, kpọmkwem na di ya. Otú ọ dị, ọ ghọtara nke ahụ onye ọ nọchiri anya ya gburu onwe ya ma kpebie inyocha ihe mere o ji mee ya.
Ọbá akwụkwọ etiti abalị, nke Matt Haig dere
Ọba akwụkwọ nke ...
Nke a bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ị nwere ike nụrịrị maka ya ma ọ ga-akacha ejikọta gị.
N'ime ya ị nwere Nora Seed onye, ​​na-amaghị otú, na-ejedebe na nke a na-akpọ Midnight Library. N’ebe ahụ, ha na-enye ya ohere ibi ndụ n’ụzọ dị iche iche, dị ka à ga-asị na o mere mkpebi ndị ọzọ ma si otú ahụ mara ihe merenụ.
Ma mgbe ụfọdụ mgbanwe ndị ahụ na-ebute ihe ndị nwere ike itinye ndụ gị n'ihe ize ndụ.
O nwere ajụjụ dị ezigbo mkpa a zara n’akwụkwọ a: olee ụzọ kacha mma isi bie ndụ?
Soft bụ abalị, nke Francis Scott Fitzgerald dere
Dị nro bụ abalị: 675 ...
Weregodị ya na ị na-ahụ ka otu di na nwunye si Amerịka bịarutere na Riviera French. Ha dị elu, ya bụ, ọgaranya. Ha mara mma, ọ dịghịkwa ka ha na-anapụ onwe ha ihe ọ bụla. Mana nke bụ eziokwu bụ nke ahụ Ha na-ezochi ihe nzuzo ha na-agaghị achọ ka onye ọ bụla mara.
Agba nke ọla edo, nke Camila Läckberg dere
Akara ọla edo: The ...
Maka ndị hụrụ akwụkwọ akụkọ mpụ n'anya, nke a bụ otu n'ime ihe kachasị adọrọ mmasị ị nwere ike ịgụ, ebe ọ bụ na onye na-eme ihe nkiri na-aghọ "onye ọbọ" ọ gaghịkwa akwụsị ruo mgbe ọ ga-eme ka onye ọ bụla mejọrọ ya kwụọ ụgwọ.
Moby Dick nke Herman Melville dere
Moby Dick (Klassị)
Ee, kpochapụwo. Ma ọ bụrụgodị na afọ na-aga, ọ ga-anọgide na-abụ otu n'ime akwụkwọ ndị na-adọrọ mmasị nke a na-aghaghị ịkwado n'ihi otú e si kọọ ya, na otú e si ebufe ya. na-achọsi ike ka onye na-eme ihe nkiri jide whale, ọ bụghị ọtụtụ ndị dere ihe ịga nke ọma.
Ọ bụrụ naanị na ị hụla ihe nkiri ahụ, e nwere ọtụtụ ihe dị n’akwụkwọ ahụ ị tụfuru, ị ga-ahụkwa otú, mgbe ị gụchara ya, ị ga-aghọta na ọ ka mma ibido ya na mbụ.
Mpako na ajọ mbunobi, nke Jane Austen dere
Nganga na akpamoke ...
Maka ndị hụrụ ịhụnanya n'anya, otu n'ime akwụkwọ na-eri ahụ anyị nwere ike ịkwado bụ nke a, Nganga na ajọ mbunobi. N'ime ya ọ na-ewega anyị oge ọzọ mana n'otu oge ahụ na-enye anyị a ọhụụ nwanyị dị elu na ọ dịghị njikere ido onwe ya n'okpuru ọchịchọ nke ọha mmadụ ma ọ bụ ụmụ nwoke.
Monologues nke ikpu, nke Eve Ensler dere
Monologues nke ikpu ...
Emegharịrị akụkọ a ka ọ bụrụ egwuregwu wee dabere, dịka aha ya na-egosi, na mmekọ nwoke na nwanyị. Gịnị ka odee mere? Gbaa ajụjụ ọnụ karịa ụmụ nwanyị 200 sitere na mba na afọ dị iche iche iji kọọ, n'ụzọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, isiokwu ndị metụtara mmekọahụ na mmekọahụ.
Akwụkwọ nke Illusion, nke Paul Auster
Akwụkwọ nke Illusion...
Ka e were ya na nwunye gị na nwa gị nwụnahụrụ gị, na o nweghị ihe fọdụrụ ná ndụ gị. Nke a bụ otú onye na-akwado akwụkwọ, David Zimmer, si eche, onye naanị ya mgbasa ozi telivishọn nke onye na-eme ihe nkiri na-agbachi nkịtị bụ Hector Mann na-eme ka ị nwee mmasị ide akwụkwọ gbasara ya.
Ya mere, na nyocha ya, ọ na-amalite ịnakọta ihe nkiri ndị o sonyere na ya, akwụkwọ ndị na-ezo aka na ya na ihe omimi nke na-anọgide na-ebuwanye ibu. Ruo n'ókè na otu nwanyị waba n'ụlọ ya na mberede na-atụ ya égbè.
Site n'aka John Verdon, Emeghela anya gị
Maka ndị na-akwado ihe omimi ndị na-enweghị ike itinye akwụkwọ ahụ ruo mgbe ọ gwụchara, na Emepela anya gị, ị nwere ihe atụ doro anya nke akwụkwọ ị na-agaghị ahapụ.
N'ime ya anyị nwere David Gurney dị ka onye na-eme ihe nkiri, nwoke a na-eche na ọ gaghị emeri emeri, ruo mgbe Zute onye ogbu mmadụ kacha mara ihe ị hụtụbeghị mbụ.
N'ezie, buru n'uche na ọ bụ akụkụ nke abụọ, na n'ezie saga bụ 7, yabụ ị nwere ike ịmalite na nke mbụ, amaara m ihe ị na-eche.
Baztán Trilogy, nke Dolores Redondo dere
N'okwu a, dị ka akwụkwọ na-ejikọta gị, anyị anaghị atụ aro otu, ma atọ. Ha niile enwere ike ịgụ ya n'onwe ya, ọ bụ ezie na ọ kacha mma ịmalite na nke mbụ.
Ọ bụrụ na fim ahụ (n'ihi na a na-emegharị ha) adịlarị ezigbo mma na nko, n'ihe banyere akwụkwọ anyị nwere ike ikwu na ị gaghị achọ ịhapụ ha ruo mgbe ha niile gwụchara.
Kedu ka anyị si mara nke ahụ e nwere ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ na nko, Ị nwere ike ịnye anyị ihe atụ ndị ọzọ nke ndị ị gụrụ wee bụrụ ihe riri ahụ site na mmalite ruo ọgwụgwụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ ndị nko
Cecilia kleiman dijo
Mpụ na ntaramahụhụ! Zuru oke!
Zaghachi Cecilia Kleiman
Akwụkwọ ekeresimesi na akụkọ. Nhọrọ
José Hierro. Ememe ncheta ọnwụ ya. Egwu